China N'èzí oche Ọgwụ Ebu factory na-emepụta | HEYA
N'èzí oche ogwu ọgwụ Ebu bụ nke oche akpụzi n'èzí n'èzí oche Injection Ebu. Dị ka dị iche iche ngwaahịa ekwekọghị, The oche akpụzi nwere ike kere n'ime omenala style na ahaziri style, dị ka rattan plastic oche ebu, n'èzí oche injection Ebu, stackable plastic oche Ebu, mpịachi oche injection ebu emeputa, wdg
Taizhou Heya akpụzi Co., Ltd na-eso echiche nke omenkà na ezi obi, na-a attentiona ntị na nghọta na ọgwụgwọ nke oche akpụzi nkọwa, na-agba mbọ na-enye ndị ahịa na-elu-edu ngwaahịa na elu-oru oma ọrụ.
Anyị na-esi ọnwụ na n'ichepụta na obi, ịnụ ọkụ n'obi ọrụ, itinye mkpa ka ihe e kere eke nke ọ bụla mmepụta njikọ, chọọ mmepe na technology, na-achọ ahịa na àgwà, na-enye gị ezi uche ebu n'ichepụta ihe ngwọta.
Anyị ga-enye gị atụmatụ ịsọ mpi dịka ngwaahịa gị na mkpa gị.
Anyị na-atụ anya iso gị rụọ ọrụ iji mepụta ọdịnihu ka mma.
Aha ngwaahịa N'èzí Oche Ọgwụ Ebu
Q: Olee otú izipu ule sample? ọ bụ n'efu ma ọ bụ mgbakwunye?
A: Heya akpụzi ga-eziga ule sample site DHL, gbasie, EMS, FEDEX ma ọ bụ TNT.And kwuru na anyị na-enye gị gụnyere ndị na-eri nke sample nnyefe 1-2 ugboro.
Q: Kedu maka njikwa mma gị?
A: Heya akpụzi nwere ọkachamara otu ịchịkwa ebu àgwà, na anyị kwenyere na àgwà akara bụ ihe mbụ mkpa na-agba ọsọ azụmahịa.
Q: Gịnị bụ ụdị nke ebu n'elu usoro ị na-eji?
A: Heya akpụzi ga-ahaziri ya site gị ina na ebu kpọmkwem, nhazi ebu n'elu dị ka: Mirror Polish; Ngwakọta; Chrome plating ọgwụgwọ na isi na uji eze; Nitride & ọgwụgwọ okpomọkụ
Q: Olee ihu ọma samples?
A: You nwere ike ịbịa ụlọ ọrụ anyị iji nweta nnwale ebu ozugbo, yana Heya akpụzi ga-ezitere gị ihe atụ & ebu na-agba ọsọ vidiyo gị.
Ajụjụ: Usoro ịkwụ ụgwọ
A: 50% T / T n'ọdịnihu, na itule tupu shippment.
Nke gara aga: Plastic oche akpụzi
Osote: Oche Ọgwụ akpụzi